Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Irlandy
Tahiry isam-bolana Jolay 2014 1 Lahatsoratra Marsa 2012 1 Lahatsoratra Marsa 2009 1 Lahatsoratra Janoary 2009 1 Lahatsoratra Tantara mikasika ny Irlandy 05 Jolay 2014
05 Jolay 2014
Manampy Ny Olona Hianatra — Na Koa Hiaro—Ny Teny Manerantany Ny Teknolojia Mpanoratra Rising Voices · Afrika Mainty Misy ireo mpisaina lasa aloha miankina amin'ny herin'ny teknolojia mba hanavotra ny teny tsy hanjavona, na hamelona indray, tranga tena vitsy dia vitsy, teny iray efa nanjavona.
Fiombonambe Eraopeana : “Alea (non) ACTA est” ? , na tsy mbola vita ve ny fanapahana? Mpanoratra Suzanne Lehn · Eoropa Afovoany & Atsinanana Ny fanetsehana ny mpiondana aterineto hanohitra ny ACTA, ny fifanekena ara-barotra manohitra ny fakan-tàhaka dia samy tsy mihalefy raha toa kosa ny PArlemanta Eraopeana tsy maintsy niatrika ny fndinihana ireo tolo-dalànanandritra ny fivoriany tao Strasbourg tamin'ny herinandro lasa. Ny fanamafisana dia nahemotra eo am-piandrasana izay ho fanambaràna avy amin'ny Fitsarana... 14 Marsa 2009
Fiombonambe Eropeana-Ukraine: Resaka fifanatonana. Mpanoratra Veronica Khokhlova · Albania Nambara ampahibemaso tao amin'ny EU-Ukraine Summit tany Paris tamin'ny 9 septambra ny fikasan'ny Fiombonambe Eropeana hanamafy ny Fifanekem-piaraha-miasa miaraka amin'ny Ukraine tamin'ny 2009. Fomba samihafa no nentin'ny haino aman-jery sy ny mpitoraka blaogy maro nandray izany. “Manolotra antoka ho an'i Ukraine ny Fiombonambe Eropeana,” hoy ny lohatenin'ny BBC. “Tsy mampanantena...
04 Janoary 2009
Ankapobe: Fihetsiketsehana manohana an'i Palestina Mpanoratra Jillian C. York · Amerika Avaratra Mitsangana hanohana an'i Gaza izao tontolo izao. Anjato arivony (an'hetsiny hoy isika) ireo olona amin'ny vazantany efatra nanao fihetsiketsehana nandritra izay dimy andro izay. Hatrany Boston ka hatrany Beirota, Le Cap ka hatrany Caracas, maro ireo olom-pirenena naneho ny firaisankinany amin'i Gaza. indreto ary misy rakitsary izay notovozina tao amin'ny ...